बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पस्यो, सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुर्यायो , के कति सिलिण्डर वगायो ? कति भयो नोक्सान ? – Ramailo Sandesh
खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर १ वेल्सीमा रहेको बाबा ग्यास उद्योगमा खोला पसेर क्षति पु-याएको छ । कयर खोलाले उद्योगमा क्षति पु-याएको हो ।
उद्योगका निर्देशक बिमल कालाखेतीका अनुसार त्यहाँका धरै सिलिण्डर वगाएका छन् । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँका सिलिण्डर वगाएर सौराहा सम्म पुगेका छन्
।”वाढीले उद्योगको संरचनामा नोक्सान पु-याएको छ । उद्योगमा १० देखि १५ हजार सिलिण्डर रहन्छ ।
के कति सिलिण्डर वगायो र अरु नोक्सान कति भयो भन्ने बारेमा एकिन भइसकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले निरन्तरको वर्षाले पूर्वी चितवनको खैरहनीसँगै रत्ननगर, राप्ती र कालिका नगरपालिका प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
स्थानीय खोलाहरु बढेर पुलहरु उच्च जोखिममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी उद्धारका लागि खटिएको छ ।
कतिपयलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा लगिएको उहाँले बताउनुभयो । लदरी खोलाको चैनपुर चोकबाट भित्र रहेको नयाँ पुल बाढीले वगाएको छ । लोथर र राप्ती खोलासमेत वढ्दै गएको भन्दै उहाँले सौराहा पनि डुवानको खतरामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
पार्टीको निर्णयबिना देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु गैरराजनीतिक चरित्र : प्रधानमन्त्री ओली